သိုက်နန်းထဲက ဥစ္စာစောင့် မင်းသားလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » သိုက်နန်းထဲက ဥစ္စာစောင့် မင်းသားလေး
သိုက်နန်းထဲက ဥစ္စာစောင့် မင်းသားလေး
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Nov 2, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 22 comments
ကျနော်ရေးခဲ့ တဲ့ပို့ စ်လေးတွေက စိတ်မကောင်းစရာလေးတွေ များနေတာဆိုတော့…တခါတလေ အပြောင်းအလဲလေး
ဖြစ်စေချင်တာရယ်…ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကိုယ်တိုင်တောင် ပြုံးရယ်မိတာလေးတွေ ရေးရင်ကောင်းမလားလို့ …။
တစ်ခြားလောက ပါတ်ဝန်းကျင်ကမဟုတ်ပါဘူး…အခုချိန်မှာ ဇာတ်သဘင်ကို ဆက်မလုပ်တော့ပေမယ့်….ပြန်တွေးရင်..
မနေ့ တစ်နေ့ ကလိုဘဲ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာ..။ က,ခဲ့ စဉ်တုန်းကပါ…။
ကျနော်တို့ ဇာတ်သဘင်တွေမှာ ကြည့်နေတဲ့ ပရိတ်သတ် သိလိုက်တဲ့ အမှား၊ လုံးဝ မသိလိုက်တဲ့ အမှားလေးတွေ ရှိပါတယ်…။
ပရိတ်သတ်က အမှားကို မသိလိုက်ရဘူးဆိုတာက စင်ပေါ်မှာ ကနေတဲ့ သူချင်းဘဲ သိပြီး ၊ ပညာသားနဲ့ ဖုံးဖိလိုက်တာပါ…။
ဒါတောင် ဖုံးလို့ ရတဲ့ အခါ ရှိသလို ၊ ဘယ်လိုမှ ဖုံးလို့ မရတာ ရှိပါတယ်…။ ဒီလို….။
ကျနော်က ဇာတ်ကပြီဆို ပဏာမအဖွင့်၊ ရှိုး၊ အော်ပရာ၊ ပြဇာတ်၊ နှစ်ပါး…ဒိုင်ခံပြီး ခေါင်းဆောင်အဖြစ် က”တာ…။
ကျနော် မက ချင်တာက နောက်ပိုင်းဇာတ်…၊ နောက်ပိုင်းဇာတ်ကပျြမှုကို အထင်မသေးပါဘူး….
နောက်ပိုင်းက တယ်ဆိုတာ ပညာပြည့်ရမယ်…စာပြည့်ရမယ်..ဇာတ်လမ်းထဲက စာ၊ အလွမ်း၊ ငို ချင်း၊ ညည်းခြင်း အကုန်အလွတ်ကျက်ရတာ…၊ စာကို မဖြစ်မနေ ကျက်ရင်ရပေမယ့် ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ စကားတွေကို နဘေ၊ပါဠိနဲ့ ပြောပြီး.
ငိုဘို့ အရေး စာတွေ အကြာကြီး ရွတ်ပြီးမှ အော်ငိုပြီး တောင်ရှည်လေးကို မျက်နှာ အပ်လိုက်တာ…အဲဒါဘဲ…။ပြဇာတ်မှာ ကြိုက်သလို
ငိုပြလို့ကျနော်ရတယ်…အဲဒီ လို ငိုရတာကို ကျနော်က အမြဲ ရီချင်တာ…။
ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းဇာတ် ကျနော် မက”ဘူး…နောက်ပိုင်းမင်းသားတစ်လက် ဌားထားတာ…သူက သူငို ..ဇာတ်ကို သူစီးဘဲ။
သူကလည်း သူ့ တာဝန် သူကျေပါတယ်…ဒါပေမယ့် ရန်ကုန် အောင်ဆန်းကွင်းလား ၊ ၀ါယာလက်လား မသိဘူး ကတုန်းက…
သူ့ နေရာကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်…မြို့ ပေါ်ပွဲက အရေးကြီးတာကိုး…။
ယိမ်းမင်းသား၊ သို့ မဟုတ် လက်ထောက်နဲ့ ကခိုင်းပါလား ဆို တော့ ၊ ပရိတ်သတ်က ညီလေးပါ နောက်ပိုင်း ကပေးမယ်ကြားရင် ပို စိတ်ဝင်စားမယ်…ဘာ ညာ သူ မြှောက်ပြီး အပူကပ်တော့တာဘဲ…။ အဲဒါနဲ့ ကပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီး…ဘာဇာတ်လဲ မေးတော့..
သိုက်ဇာတ်လမ်းတဲ့ မောင်နှမ ၅ယောက် ရှိတယ်…အစ်မ၃ ယောက် မောင်က ၂ယောက်ပေါ့….။
ဇာတ်က ကျနော့် အထက်က အကို နဲ့လူမလေးနဲ့ ကြိုက်တယ်…ထုံးစံအတိုင်း မိန်းကလေးရဲ့ ဖခင်က သိုက်ဆရာ…။
အကိုက လုံးဝမပြော၊ သိုက်ဆရာက ရီုက်…နောက်ဆုံး မခံနိုင်တော့ သိုက်နေရာကို ပြောပြပေါ့…။
နောက်အကို့ ကို အပိုင်ကိုင်ပြီး သိုက်တံခါးဝကိုရောက်….ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ ရိုက် မောင်နှမတွေ မခံနိုင် …အားလုံးထွက် ၊ ငိုကြယိုကြ၊ လွမ်းကြပေါ့…။
ဒါနဲ့ကျနော်က ဘယ်အချိန် ငိုချင်းနဲ့ သိုက်ကထွက်ရမလဲ…အထာလေး တစ်ခု လုပ်ထား ဆိုတော့…..
“ သိုက်ဆရာက ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ကြမ်းပြင်ကို ရိုက်လိုက်တာနဲ့ …၀င်လို့ ရပြီ ညီလေး” တဲ့ …။
အိုကေ…ကျနော်သိပြီ..ရပြီဆိုတော့ သူလဲ စိတ်ချမ်းသာပြီး..ကျေးဇူးပါ…ဘာ ညာပေါ့…။
အဲဒီည နှစ်ပါးပြီးတာနဲ့ခေါင်းပေါင်းတွေ ဘာတွေ ချွတ်ပြီး…တစ်စထောင်နဲ့ယောင်ထုံးနဲ့ ပေါ့ဗျာ…။ ခန့် ခန့် သန့် သန့် 
ဒါပေမယ့် ကူညီပြီးသာ ကပေးချင်တာ လူကတော်တော်ကို အိပ်ငိုက်နေပြီ…၃ ည ရှိပြီလေ…နေ့ ဘက်ဆိုလဲ မိတ်ဆက်လာသူတွေနဲ့ သိပ်အိပ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး…။ ကိုယ်ဝင်ပေးရမယ့် အခန်းကို စောင့်ရင်း ဧည့် သည်တွေနဲ့ ပြောနေရာက မျက်စေ့က စင်းနေပြီ…
ဒါကြောင့် ၀ီရိယလေးထားပြီး… စင်ပေါ် တက်နေလိုက်တယ်…ကလကာ အကွယ်ဇာတ်သေတ္တာလေးပေါ်မှာ…။
ကားဆွဲနေတဲ့ ကောင်လေး အောင်အောင် ကို ပြောထား၇တယ်…
“ အောင်အောင် အကို သေတ္တာပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ခဏ မှေးနေမယ်… သိုက်ဆရာ ကြမ်းပြီ ဆို အကို့ ကိုနှိုးလိုက်” ။
ပြီးတာနဲ့ထိုင်ရက်လေး အိပ်တော့တာ…။ လူကသာအိပ်တာ…နားကိုတော့ စွင့်ထား၇တာပေါ့…။
ဘယ်လောက်ထိ အိပ်ငိုက်မိလဲ မသိပေမယ့်… “ ငါဆရာကြွားကို စမ်းတာလား…..ဖျန်း” ဆိုတဲ့ကြမ်းပြင်ရိုက်တဲ့အသံလဲ ကြားရော…
“ အောင်မလေး…ပူလောင်လှချည်ရဲ့ …ကယ်တော်မူပါဘုရား…..”
ဆိုပြီး…ငြီးချင်းလေးအော်ပြီး…ဇာတ်စင် အလယ်နားကို တောင်ရှည်စလေး မျက်နှာအပ်ပြီး စတိုင်လေးနဲ့ ထိုင်ချလိုက်တော့….
သိုက်ဆရာရော …နောက်ပိုင်းမင်းသားရော အလန့် တကြားနဲ့ လှည့်ကြည့်တယ်..သူ့ ခမြာ ငိုမလို့အားယူနေတာ ပါးစပ်လေး ဟ” လို့ ..။
ပြီးမှ ပရိတ်သတ်မသိအောင်ကျနော့်ကို တိုးတိုးလေးမေးတယ်…
“ ညီိလေး ဘာလာလုပ်တာလဲ” တဲ့ ..။ သိုက်ဆရာကလဲ မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ …ကြောင်ကြည့်နေတာ…
ကိုယ်ကလဲ ပြော၇တာပေါ့…“ဟင် …ကြမ်းပြင်ရိုက်နေပြီ မဟုတ်လား…”ဆိုတော့..
“ အမ် …ဒါသိုက်မှာ ရိုက်တာ မဟုတ်ဘူး…ကိုယ့်ကို အခုမှ ဖမ်းချုပ်ပြီး သိုက်ဘယ်မှာလဲလို့ မေးတုန်း…”
“ ဒါဖြင့် ဘာလို့ ကြမ်းပြင်ရိုက်လဲ”…
“ ဟာ…ကျနော့်ကို ပြောတုန်းက ကြမ်းပြင်ရိုက်ရင် ၀င်လို့ရပြီဆို”
“ ဒုက္ခဘဲ…ခုရိုက်တာက လူ့ ပြည်မှာ ….ညီလေး..ပြန်ဝင်သွားလိုက်”
“ ဟာ…ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဘယ်လိုပြန်ဝင်ရမှာလဲ…စကတည်းက သေချာလဲ မပြောဘူး”
နောက်ပိုင်းမင်းသားမှာလဲ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ …
“ လုပ်ပါ ညီလေးရာ..လိမ်မာပါတယ်.. မနက်ကျ လ္ဘက်ရည်နဲ့ မုန့် ကျွေးမယ်…ဟုတ်လား”
“ တကယ်နော်… ကတိမပျက်နဲ့ …”
“ မပျက်ပါဘူး ဆရာရယ် အခု ၀င်ပါတော့…ဒီမှာ ဘယ်လို ဆက်ကရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး”
“ လန်ဒန် ဆေးလိပ်တစ်ပွဲ…ရော…နော်”
တယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဈေးညှိနေတုန်း သိုက်ဆရာက ရှေ့ မှာ စာတွေရွတ်ရင်း ထိန်းပေးထားတာပေါ့…
နောက်မှ မင်းသားကြီး ရှေ့ တစ်လှည့် ထွက်ပြီး ပြောငိုလေးလုပ်နေရတာပေါ့..။
ကျနော့်နားဘက်ကို မယောင်မလည်နဲ့ သိုက်ဆရာ ကပ်လာပြီး…
“ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သိုက်ထဲက ထွက်လာတာလား” တဲ့ ..။
“ ဘာလဲ…ကြမ်းပြင်ရိုက်လို့ ထွက်လာတာ ၊သိုက်မှာ မရိုက်ဘဲ ဘာလို့ ဒီမှာရိုက်လဲ”..
“ မင်းသားရယ်…နည်းနည်းပါးပါး လဲ နားစွင့်ပါဦးလား၊ သိုက်ဆရာ လုပ်စားလို့ ရိုက်ရင်တောင် အကန့် အသတ်နဲ့ ရိုက်ရမလို ဖြစ်နေပြီ”
“ ဘယ်သိမလဲ…က”နေကျမှ မဟုတ်တာ..ကဲ ..အခု ဘာလုပ်မလဲ”
“ ဘယ်လို မျက်နှာနဲ့ ဝင်မလဲ..ခုထွက်လာ…ခုပြန်ဝင်နဲ့ …”
“ ကျုပ်လဲဘယ်လို ပြန်ထုတ်ရမလဲ…နတ်တွေကို ပြန်ပို့ တာဘဲ ရွတ်တဲ့ စာရှိတယ်၊ သိုက်ပို့ စာ မရဘူး”
“ အဲဒါ ဘကြီးလိုတာပေါ့…နောက်ပိုင်းလူကြမ်းက စာအကုန် ရရမယ်လေ”
“ ဟာာာာာ အရစ်ဘဲ ငါ သေချင်တယ်..ဒီမင်းသားနဲ့ တော့..”
“ ပြန်ဝင်ဆိုလဲ ပြန်ဝင်မယ်.. မနက် ကျ ဘာကျွေးမလဲ ပြော..”
“ ဟင် ကျုပ်က ဘာဆိုင်လို့ ကျွေးရမှာတုန်း”
“ ဘကြီး ရိုက်ချင်သလို ရိုက်လို့ မှားကုန်တာလေ.. ဘကြီး တာဝန်ဘဲ၊ ကျနော် ပြန်မ၀င်ဘူး”
“ ကဲ…ဆမူဆာ ၃လုံးကျွေးမယ်ကွာ..ဟုတ်ပြီလား”
“ ကတိတည်ပစေနော်… ကဲ …ဒါဆို သိုက်ပို့ စာ ရွတ်တော့”
“ ဟာ…မရပါဘူးဆိုမှ ငါပါ ငိုချင်လာပြိနော် မင်းသား…အဲလောက် မကြပ်နဲ့ ..”
“ ရရ မရရ ၊ ရွတ်ချင်သလိုရွတ်ပြီး…ကြမ်းပြင်ပြန်ရိုက်လိုက်…ကျနော် ပြန်ဝင်သွားမယ်..ဟတ်လား”
အဘိုးကြီးလဲ အကျပ်ရိုက်နေပုံရပါတယ်…ပါးစပ်ကလဲ ပွစိပွစိနဲ့ …
ကျနော့်ကိုလဲ သိပ်မပြောရဲဘူး…၊ ခဏနေမှ..
“ ဟားဟားဟားဟား….မိုးပေါ်မှာသကြား…မိုးပေါ်မှာသကြား…လူ့ ပြည်မှာ ငကြွားတဲ့ ဟေ့( ပလို့ ဂျိ)…( အပေါ်မှာ မှားနေတာကို ဆိုင်းဆရာတွေ ရိပ်မိတယိ…ကျနော် ဂျစ်တိုက်တာလဲ သူတို့ သိတယ်)။ …ငါလို ဆရာကို အာဏာပြိုင်မယ်ကြံသလား….ငါ့ကိုများ ပမာမခန့် နဲ့ စည်းထဲ ခုန်ဝင်လာရဲသေးတယ်…ဟင်..
ဠင်းတနီ အူစွပ်၊ ဥုံခံကာ ရွတ်လို့ သိုက်တစ်ကာသိုက်၊ အပူတိုက်ဖြစ်စေတဲ့ ..ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ ရိုက်လိုက်မယ်…မဆိုင်သူ ၀င်မလာနဲ့ ..စည်းအပြင် ထွက်ရော့လဟယ်…ဗျန်း..”
တခွန်းတော့ အော်ခဲ့ ပြီး နောက်ပြန် ခပ်စောင်းစောင်းနဲ့ကားလိပ်ကြားက သေတ္တာပေါ် လွှားကနဲ ခုန်ဝင်လိုက်တာပေါ့…
ကံကောင်းလို့ ပြန်ပြုတ်မကျတာ…ခုန်ချတာသာလွယ်တာ..နောက်ပြန် ခုန်တက်ရတာ..မလွယ်ဘူး..
ပြောဆိုဖြစ်ပျက်သွားတာက ခဏလေး…ပရိတ်သတ်လုံးဝ မသိလိုက်ဘူး။
သေတ္တာမှာ ကုတ်ကပ်ပြီး ဖြစ်နေတာဆိုလို့ လာမိတ်ဆက်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဘဲ တွေ့ တာ…(သူက ကားလိပ်ကြားမှာ
အသင့်လာစောင့်နေတာ…ချွေးတို့ ပေးဘို့တို့ ပတ်လေးနဲ့ …
ကိုယ်ကလဲ…ခပ်ရှက်ရှက်နဲ့ …အဟီး ဆို ရီပြလိုက်တာ…။
ဒါတောင် ကောင်မလေးက မရိပ်မိဘဲ..ပြောနေသေးတယ်…
“ အကို…ချွေးတွေ သုတ်လိုက်ဦး….သိုက်ထဲက ပြန်လာတာ..မောလာပြီ” တဲ့ ။
ကျနော်လဲ အရှက်ပြေ ပြောလိုက်ပါတယ်…
“ ဟုတ်တယ်…ကိုယ် သိုက်ထဲကို သွားမွှေလာတာ” လို့ ။
အမှန်က အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ဇာတ်စင်ပေါ်ကို သွားမွှေခဲ့တာ..။
ဟင်းဟင်းးး ဟင်း ပျော်စရာကြီး…
မနက်ကမိုးလင်းရင် ဘရိတ်ဖတ်စ် ဆွဲရေးကတော့ ရှယ်ဘဲ။
တခါတခါ ခပ်တည်တည်နဲ့ကြပ်တတ်တဲ့
ဆရာမင်းလူရဲ့ သဘာဝကျကျဟာသများကို ဖတ်တုန်းက ပြုံးစိစိတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာမျိုးလေး
အခု ပိုစ့်ကိုဖတ်တော့ အဲဒီရသ ရတယ်
ကျွန်တော့်ကို ရွှေမန်ကျည်းတောင့် လေးတစ်တောင့်လောက်ပေးပါ
ကဲ..ရှေးဘ၀ ကုသိုလ်ရေစက် ပဌာန်းဆက်ကြောင့် အကိုတော်က ညီတော်လေးကို ကူညီပါ့မယ်ကွယ်းးးးးးကူညီပါ့မယ်
အင်းးးးးးးမောင်မင်းမှာ နဂိုက ရှိတာ ၁တောင့် အခု တစ်တောင့် ဆိုတော့ ၂ တောင့်…
ဟိုက်..မောင်မင်းကို ပေးလိုက်တော့ ငါ့မှာ တစ်တောင့်မှ မရှိတော့ဘူး..။
သိုက်လောကမှာ ဖြတ်ဖောက်ချုပ် လက်မခံဘူး ညီတော်လေးရဲ့ ။
အား ပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်သာသိုက်ဆရာ ဆို စမူဆာ မကျွေး ဘူး၊ ပြန် မဝင် မချင်း ကြိမ် နဲ့ လိုက် ကျွေး မှာ ဟီး ဟီး
တားတားကို အဲလိုရိုက်ရင် စင်အောက်က တားတားကောင်မယေးတွေက သိုက်ဆရာကို ပြောင်းဖူးရိုးတွေ ခဲတွေ ကြံပိုင်းတွေ ပြန်ကျွေးမှာ ပေါ့…ဟီဟိးD
ဆြာခေါင်တော်တော်မျက်နှာပြောင်တာပဲ။ မိတ်ကပ်တွေကုန်သွားလို့ မူရင်းရုပ်ပေါ်လာတာနေမှာ။ဆြာခေါင်မေမြို့မှာ က’ ရင် ပန်းလာပေးတဲ့ကောင်မလေးတွေအများကြီးနေမှာ။ အဲ့မှာ ပန်းဂေါ်ဖီတွေပေါတယ်လေ။
မလဲ့ လဲ ..ခေသူမဟုတ်..စ တတ်သားဘဲ..ဟိုနေ့ ကတော့ ကြောက်တယ်ဆို…း)
ကျနော် အကြိုက်ဆုံး ပန်းဂေါ်ဖီ လာပေးလို့ ကတော့ ကျေးဇူးတင်ပြီး မွှေးမွှေးတောင် ပေးလိုက်မှာ..။
ငယ်ကတည်းက အဒေါ်က ပန်းဂေါ်ဖီ ကြော်ထားရင် မြည်းရင်းမြည်းရင်း လက်လွန်နေကျ။
ပန်းဂေါ်ဖီကို ကြက်ဥနဲ့ ရောကြော်ပြီး… ပေါင်မုန့် နဲ့ စားကြည့်ပါလား…ကောင်းမှကောင်း..။
နောက်တခု မကျည်းနှစ်လေးကို ရေနဲ့ ဖျော် ငြုပ်သီးစိမ်းလေးလှီထည့်..ဆား နည်းနည်းထည့်…
ဂေါ်ဖီပွင့် ကို အစိမ်းလိုက် အမွှာလေးအတိုင်းဖဲ့ထည့်ပြီး မကျည်းရေထဲမှာစိမ်ထား…နာရီဝက်လောက်ကြာမှ ဘူးသီးကြော်..ကုလားပဲ ကြော်တို့ နဲ့အချဉ်အဖြစ် တွဲ စားကြည့်… ကောင်းမှ ကောင်း။
အဲ့ဒီ ခေသူမဟုတ်ဆိုတာကြီးကြားရရင် ဟိုလူရီးတွေပြောပြောနေတဲ့ သမတ ကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် ကိုသွားသွားမြင်ယောင်တာ။အဟင့်င့်။ ပန်းဂေါ်ဖီ ကို သနပ်လုပ်စားရင်လည်းကောင်းမှကောင်း။ အစိမ်းသုပ်စားလည်းကောင်းတယ်။ ဒီအတိုင်းကိုက်စားလည်း ဂျွတ်မှဂျွတ်။ လက်ဖက်ထဲလည်းရောနယ် များများစားရသည်။ ဆြာ့ခေါင့် နည်းတော့ မစားဘူးသေးဖူး။ စမ်းကြည့်အုန်းမယ်။
သိုက်ဆရာကြီး အကြံအိုက်အောင်လုပ်တဲ့ အုတ်ဒဇောင့်တော့
မမမာ စိတ်ပေါ့ပါးပြီး ရယ်ရတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လဲ ပြုံးနိုင်တာပေါ့…။
ကျနော်က အဲလိုလေးတွေ စတတ်တယ်..မမာရဲ့ ..။
ကျနော့်ကို ပြန်ကျပ်တာတွေလဲ အများကြီးနော်..ကိုယ်လဲ ခံရတာဘဲ..။
ဇာတ်သဘင်နယ်က လူတွေ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြပေမယ့် အဲလို မမေ့နိုင်စရာ ချစ်ခင်စရာ အပြုအမူလေးတွေနဲ့ ဘဲ
အချင်းချင်း သံယောဇဉ်ထားကြရတာပါ.. မမာရေ။
ခေါင် ဒီ ပို့(စ) ကိုမဖတ်ဖြစ်သေးဘူးထင်လို့။
နာ့ လာကြပ်လို့ဂဒေါ့ အုန်းထမင်းကျွေးဘူးမှတ်!!
ဖတ်ပြီးပြီ…ဂီကိုလဲ အသိအမှတ်ပြုပြီး ပို့ စ်တစ်ပုဒ်ရေးနေတုန်းမို့ …
သူ့ ကို ၀တ်ကျေတန်းကျေ စကားလေးနဲ့မချီးမွမ်းချင်ဘူးလေ…။
ရေးပြီးတာနဲ့တင်မှာပါ မခိုင်။
အုန်းထမင်းစားပြီးမှ ကြပ်မှာပေါ့လို့ …ခက်တာမှတ်လို့ရှေ့ နောက်လေးဘဲ ပြောင်းရမှာဘဲဟာ…ဟုတ်ဘူးလား
တာမွေလူမိုက် တွေ့မရှောင် မဇာယိ တယောက် အချွန်နဲ့ မဘီ…
ပြည်သူ့ သံချောင်းတို့အမျိုးလား မသိ …
အူးလေး …. ဗဂျီသင်တန်းဖွင့်ပါဆိုဗျာ ….
ပန်းချီသင်တန်း ဖွင့်ပါ့မယ် ဆရာရယ်..
အခုလည်း အထက်ကို တင်ပြထားပါတယ်..
ဲအဲဒီက တဆင့် လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းမှာပါ… ဟုတ်လား..။
လွဲလည်း လွဲသေး မနက်စာလဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်လိုက်သေး ဆိုတော့…..
သူတို့ အလှည့် ၀ိုင်းကျပ်ရင်လဲ ကိုယ်လဲ လှိမ့် နေအောင် ခံရတာ..။
အဲလို အခက်အခဲ ကြားက မနက်စာအဆင်ပြေအောင် လုပ်နိုင်တာကိုက ကိုယ်တို့ သိုက်က အရည်အချင်းတခုဘလြေ..ဟေးဟေး
ကိုယ်တို့ က ….ခရိုနီ သိုက်က။ ခေသူမဟုတ်
ခညားဂျီးဂလည်း တစ်ခါတစ်ခါ …
ဒါ့ထက် .. ခပ်တည်တည်နဲ့ ချောင်အောင်ရော လုပ်ဒတ်ဒလားငင်င်င် …
အပေါ်က ဖားသဂျိုး = သဂျား ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ရေလည် ခိုက်တွားဘီ .. ခွိခွိ
ဒါလေးကို ပီပီပြင်ပြင်လေး ထပ်ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆို မိုက်မယ်ဗျာ ကိုကျော်
ညီလေးပြောတာဟုတ်ပါတယ်.. ခု အကိုရေးပုံက ဟို..သူငယ်ချင်းတွေကို ရယ်စရာပြောပြတဲ့ သဘောမျိုးဘဲ ဖြစ်နေတာကိုး…
နောက်ကျရင်တော့ သေချာလေး ရေးမယ် ကိုသော်..။
သားလေးကျော်စွာက ရွာထဲကမှာ ပရိုဆန်တဲ့ ဒရမ်မာ အရေးအသားရှိသူပါ..။
အဘဘုတ်တော့ ဆုရသွားတဲ့ ပို့စ် ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဒရမ်မာတွေ
သားလေးမှာ ပိုလက်စွမ်း စိတ်စွမ်းရှိမယ်လို့ မြင်တယ်…
သားလေးကျော်စွာ တစ်ဆင့်နိမ့်လက်စွမ်းနဲ့ ရေးနေသလားလို့တောင် မြင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဘဘုတ်က သားလေးကျော်စွာ ပရိတ်သတ်ပါကွယ်။
ပထမဆုံး ၀မ်းသာ ကြည်နူးစိတ်နဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာက
“ သားလေး ကျော်စွာ” လို့ခေါ်လိုက်တဲ့…အရေးအသားလေးကိုပါ..။
ဘ၀မှာ ပထမဆုံး အခေါ်ခံရတာပါဘဲ..။ ကျေးဇူးပါ..။
တချို့ အကြောင်းအရာတွေ ရေးဘို့ ရှိပေမယ့် ကျနော် အရင်က ဘာသာရေးပို့ စ် တခု တင်ဘူးတယ် အဘ ဘုတ်ရဲ့ ..။
တချို့ ပို့စ်တွေ တင်လိုက်ရင်..အတွင်းကျကျ ကျနော့်ကို မသိနိုင်သူတွေက ဒါ့ကြောင့် ဒီလူ ဒီလိုစာရေးတာပေါ့လို့ထင်မြင်ခဲ့ရင်
အရင်ပို့ စ်က စိတ်ရင်းခံ စေတနာလေးကိုပါ..အရောင်စွန်းနိုင်လို့ချိန်ဆနေတာပါ..။
နောက် ဒါက ဖိုရမ်တခုလို ဖြစ်တော့ ကျနော့်ရဲ့ဘ၀ ကြီး ခင်းပြသလို ဖြစ်နေရင်..သူများတွေ အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေမှာလဲ စိုးလို့ ပါ..။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တော့ ချပြမိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
အဘဘုတ် ကို ကျေးဇူးပါဗျာ..။
အခုလည်းအတွေ့အကြုံတွေရေးရင်း ဇာတ်သဘင်ရဲ့ သဘောသဘာဝလေးတွေ သိရတာပေါ့နော..
ရီလိုက်ရတာ။ ပရိတ်သတ်မသိအောင်တောင်ဈေးရအောင်ဆစ်လိုက်သေး တော်ဘာပေ့မင်းသားရယ်။